MISY OLOBE MPIRAY TSIKOMBAKOMBA : Tetika efa nomanina ny nandefasana an’i Claudine
Araka ny fantatra anefa dia efa nivoaka ny didy mikasika an’i Claudine Razaimamonjy, fa « tsy mahazo mivoaka eto Madagasikara izy, noho ny raharaha izay mbola hanenjehana azy ». 12 avril 2017
Araka ny vaovao voaray, dia nisy olona ambony no nampitsoaka an’i Claudine Razaimamonjy teny amin’ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra), nitsaboana azy, ka nalefa any ampita ity farany nanohy ny fitsaboana. Ny talata maraina lasa teo, tamin’ny 3ora sy sasany no nialà tao amin’ny hopitaly io mpandraharaha io niaraka tamin’ny fianakaviana akaiky azy sy ny Loholona iray ary ny mpiandry fonja.
Tsy voahaja anefa izay lalàna izay, ka izao nalefa (ndlr : nitsoaka) any am-pita nitsabo tena izao.
Voalaza ihany koa fa « tsy vita eto an-toerana ny fitsaboana azy noho ny aretina nihombo taminy, ka izao notsaboina atsy amin’ny nosy Maorisy izao izy ». Maro ny fanontaniana mipetraka mikasika ity raharaha ity saingy araka ny fanazavana voaray dia mety hijanona ho dosie mipirina na « dossier classé » ny mikasika azy io. Mety hisy tohiny ve izany ny fanadihadiana ataon’ny Bianco ? Ny teo anivon’ny sendika kosa dia nilaza mazava, fa hanokatra fanadihadiana manokana mikasika io fivoahan’ity mpandraharaha voasaringotra amina raharaha kolikoly avo lenta ity, any ampita. Tantara mitohy.